शीर्षकमा बाइबल पदहरू: बांझपन -> जीवन
१ शमूएल २:२१
परमप्रभुले हन्‍नाहलाई आशिष् दिनुभयो र तिनले अरू तीन छोराहरू र दुई छोरीहरू जन्‍माइन्। बालक शमूएल परमेश्‍वरको सेवामा बढ्दै गए।
संसारमा अरू कुनै जातिले तिमीहरूले झैँ प्रचुर आशिष् पाउनेछैन। तिमीहरू कोही पनि अपुताली हुनेछैनौ। तिमीहरूका गाई-वस्‍तु कुनै पनि थारा हुनेछैनन्।
बितेका चालीस वर्षभरि कसरी परमप्रभु तिम्रा परमेश्‍वरले यो लामो यात्रामा तिमीहरूलाई अगुवाइ गर्नुभयो, त्‍यो याद गर। तिमीहरूलाई जाँच्‍नलाई उहाँले कठिन समयहरू पनि पठाउनुभयो अनि तिमीहरूले के गर्न इच्‍छा गर्दछौ र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौ कि गर्दैनौ भनेर जान्‍न मन गर्नुभयो।
परमेश्‍वरले आशिष् दिँदै यसो भन्‍नुभयो, “तिम्रा धेरै छोरा-छोरीहरू होऊन् र तिम्रा सन्‍तानले सारा पृथ्‍वी भरून् र त्‍यसमाथि अधिकार गरून्। माछा, चरा-चुरुङ्गी र सबै जङ्गलका पशुहरू म तिम्रा हातमा दिँदै छु।
रिबेकाका छोरा-छोरी भएका थिएनन् र इसहाकले उनको लागि परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। परमप्रभुले उनको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो र रिबेका गर्भवती भइन्।
विश्‍वासकै भरमा अब्राहाम धेरै बुढो भएर पनि बुबा बन्‍न सके। सारा पनि सन्‍तान हुनै नसक्‍ने गरी बुढी भइसकेकी थिइन्। तैपनि अब्राहामले परमेश्‍वरले आफ्‍नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्‍छ भनेर विश्‍वास गरे।
१ कोरिन्थी ३:१६
तिमीहरू परमेश्‍वरका मन्‍दिर हौ अनि परमेश्‍वरका आत्‍मा नै तिमीहरूभित्र बस्‍नुहुन्‍छ। के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन?
“तिमीहरू ममा रहेर शान्‍ति पाउन सक भनेर नै मैले तिमीहरूलाई यी सबै कुरा भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्‍ट हुनेछ, तर साहसिलो होओ किनभने मैले संसारलाई जितिसकेको छु।”
बाँझी स्‍त्रीलाई तिनैको घरमा उहाँले आदर दिनुहुन्‍छ। उहाँले तिनलाई बाल-बच्‍चा दिनुभएर खुसी गराउनुहुन्‍छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर!
छोरा-छोरीहरू परमप्रभुका दान हुन्, तिनीहरू साँचो आशिष् हुन्।
तिम्रा घरमा तिम्री पत्‍नी फल दिने अङ्‌गुरको बोटजस्‍तै हुनेछिन्‌ र तिम्रा टेबिलका चारैतिर तिम्रा छोरा-छोरीहरू कलिला भद्राक्षका मुनाझैँ हुनेछन्।
तपाईंले मेरो हरेक अङ्ग बनाउनुभयो, आमाको गर्भमा तपाईंले मलाई रच्‍नुभयो।
उहाँले हृदय टुटेकाहरूलाई निको पार्नुहुन्‍छ र तिनीहरूका चोटमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्‍छ।
यसकारण म तिमीहरूलाई भन्‍छु, तिमीहरूले प्रार्थना गरेर जे माग्‍छौ, ‘मैले पाइसकेको छु’ भनेर विश्‍वास गर अनि तिमीहरूले मागेको कुरा पाउनेछौ।
म ख्रीष्‍टले दिनुभएको शक्तिले नै यी सबै कुरा गर्न सक्‍छु।
तिमीहरूले पाएको आशामा खुसी रहो। कष्‍टहरूमा धैर्य बन र सधैँ प्रार्थनामा लागिरहो।
 फेरि सुन, अब तिम्रो नातेदार एलीशिबा पनि छोरा पाउने भएकी छन्। तिनी बुढी भइसकेकी भए पनि अहिले तिनको कोखमा छ महिनाको बालक छ। तिनका त छोरा-छोरी नै हुँदैन भनिएको थियो। तर हेर, परमेश्‍वरले गर्न नसक्‍ने कुरा केही छैन।”
 त्‍यति मात्र होइन, दु:खमा पनि हामी खुसी छौं किनभने दु:खले दु:ख सहने शक्ति दिन्‍छ, दु:ख सहने शक्तिले हामीलाई पाको बनाउँछ। हामी पाको भएपछि आउँदो समयको लागि साहस र आशा पाउँछौं। हामी यस आशामा निराश हुनेछैनौं किनभने परमेश्‍वरले पवित्र आत्‍मा दिनुभएको छ र पवित्र आत्‍माले हाम्रो हृदयमा परमेश्‍वरको प्रेम भर्नुभएको छ।
 तर स्‍वर्गदूतले उनलाई भने, “ए जकरिया, नडराऊ, परमेश्‍वरले तिम्रो बिन्‍ती सुन्‍नुभएको छ। तिम्री पत्‍नी एलीशिबाले एउटा छोरो जन्‍माउनेछिन्। तिमीले तिनको नाउँ यूहन्‍ना राख्‍नू। त्‍यस बेला तिमीलाई हर्ष र आनन्‍द हुनेछ र अरू धेरै मानिसहरू पनि तिनको जन्‍ममा रमाउनेछन् किनभने तिनी प्रभु परमेश्‍वरको नजरमा ठूला मानिस हुनेछन्। तिनले दाखमद्य वा कुनै पनि मद्य खानेछैनन्। तिनी आमाको कोखमा हुँदा नै पवित्र आत्‍माले भरिनेछन्। तिनले इस्राएली जातिका धेरै मानिसहरूलाई आफ्‍ना प्रभु परमेश्‍वरतिर फर्काउनेछन्। तिनले आत्‍मा र शक्तिमा एलियाजस्‍तै भई प्रभुको अघि आएर उहाँको बाटो तयार पार्नेछन्। तिनले बुबा र छोरा-छोरीहरूको बीचमा मेलमिलाप ल्‍याउनेछन् र अट्टेरीहरूलाई परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्ने मानिसको ज्ञानतिर डोर्‍याउनेछन्। यसरी तिनले प्रभुका जनलाई उहाँकै निम्‍ति तयार पार्नेछन्।” जकरियाले स्‍वर्गदूतलाई भने, “यो कुरा पक्‍का हुन्‍छ भनेर मैले कसरी पत्‍याउने? म त बुढो भइसकेको छु र मेरी जहान पनि बुढी भइसकेकी छिन्।” स्‍वर्गदूतले जवाफ दिए, “म परमेश्‍वरसँग रहने गब्रिएल हुँ। उहाँले नै मलाई तिमीसँग कुरा गर्न र यो सुसमाचार सुनाउन पठाउनुभएको हो। मैले भनेको कुरा ठीक समयमा पूरा हुनेछ। तर हेर, तिमीले मैले भनेको कुरालाई विश्‍वास नगरेकोले यो कुरा पूरा नहुञ्‍जेल तिमी बोल्‍न सक्‍नेछैनौ।” बाहिर मानिसहरू पर्खिरहेका थिए र जकरियाले ढीलो गरेकोमा अचम्‍म मानिरहेका थिए।
 परमप्रभुको स्‍तुति गर! परमप्रभुलाई आदर दिने र उहाँको आज्ञा मान्‍न आनन्‍द मनाउने मानिस साँच्‍चै खुसी हो। असल मानिसका छोरा-छोरीहरू देशमा शक्तिशाली हुन्‍छन्, उसका सन्‍तानले आशिष् पाउँछन्। उसका घर-परिवारले धन-सम्‍पत्ति कमाउँछन् र सधैँ उसको फलिफाप हुनेछ। असल मानिसको लागि र जो कृपालु, दयालु र धर्मी छन्, तिनीहरूको लागि अन्‍धकारमा ज्‍योति चम्‍कन्‍छ। त्‍यो मानिस खुसी रहन्‍छ, जसले मुट्ठी खोलेर ऋण दिन्‍छ र आफ्‍नो व्‍यापार इमानदारीसाथ चलाउँछ। असल मानिस कहिल्‍यै असफल हुन्‍न, उसलाई सधैँभरि मानिसहरूले याद गर्छन्। दुष्‍ट समाचार पाएर ऊ हड्बडाउँदैन, उसको विश्‍वास दरिलो छ र उसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्‍दछ। उसलाई डर वा फिक्री हुँदैन, उसले अवश्‍यै आफ्‍ना शत्रुहरूको हार भएको देख्‍नेछ। उसले अभावमा परेकाहरूलाई खुला मनले दिँदछ र उसको दया कहिल्‍यै हराउँदैन। ऊ शक्तिशाली हुनेछ र उसले आदर पाउनेछ। दुष्‍टहरूले यो देखेर रिस गर्छन्, तिनीहरू दाह्रा किट्छन् र लोप भएर जानेछन् र तिनीहरूका आशा पनि सधैँको लागि हराइजान्‍छन्।
 हे यरूशलेम, तँ बाँझी स्‍त्रीजस्‍तो छस्। तर अब तँ आनन्‍दले गाउन र कराउन सक्‍छस्। लोग्‍नेले नछोडेकी स्‍त्रीको भन्दा ज्‍यादा अब तेरा सन्‍तान हुनेछन्। तँ बास गर्ने पाल बढा, तेरा पाल सङ्कोच नमानी फैला, त्‍यसका डोरीहरू लामा-लामा गर्‌ र किलाहरू बलिया बना। चारैपट्टि तैँले आफ्‍नो सिमाना फैलाउँनेछस्, अहिले अरू जातिका हातमा परेका जमिन तेरा मानिसहरूले लिनेछन्। अहिले उजाड भएका सहरहरू मानिसहरूले भरिनेछन्। नडरा, फेरि तेरो अपमान हुनेछैन, तँ होचो पारिनेछैनस्। तेरो जवानीपनको लाज भुल्‍नेछस्, विधवा भएपछिको घोर एक्‍लोपना बिर्सनेछस्। तेरा सृष्‍टिकर्ता तेरा लोग्‍नेझैँ हुनुहुनेछ, उहाँको नाम सर्वशक्तिमान् परमप्रभु हो। इस्राएलका पवित्र परमेश्‍वर तेरा उद्धारकर्ता हुनुहुन्‍छ, उहाँ सारा संसारका परमेश्‍वर कहलाइनुहुन्‍छ। ए इस्राएल, लोग्‍नेले त्‍यागेकी एउटी तरुणी स्‍वास्‍नीजस्‍तो तँ अत्‍यन्‍त दु:खी भएकी छे। तर परमप्रभुले तँलाई फेरि बोलाउँदै हुनुहुन्‍छ। “केही क्षणको निम्‍ति मैले तँलाई त्‍यागेको थिएँ, ठूलो प्रेमको साथ तँलाई फिर्ता लिनेछु। “एकै क्षणको निम्‍ति मात्र मैले आफ्‍नो रिसमा मुख लुकाएँ, तर सदाकालको निम्‍ति तँलाई आफ्‍नो प्रेम देखाउनेछु।” तँलाई बचाउनुहुने परमप्रभु त्‍यसो भन्‍नुहुन्‍छ। “नोआका समयमा फेरि पृथ्‍वीमा जलप्रलय कहिल्‍यै पठाउनेछैनँ भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, अब म प्रतिज्ञा गर्दछु कि म तँसित फेरि रिसाउनेछैनँ, म तँलाई हप्‍काउने र दण्‍ड दिनेछैनँ। डाँडा-पर्वतहरू टुक्रा-टुक्रा हुन सक्‍लान्, तर तिमीहरूको निम्‍ति मेरो प्रेम कहिल्‍यै अन्‍त हुनेछैन, मेल-मिलापको यो मेरा करार म सदाकाल राखिछोड्‍नेछु।” तँलाई दया गर्नुहुने परमप्रभुले त्‍यसो भन्‍नुहुन्‍छ। परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “ए यरूशलेम, दु:ख भोगिरहेको, असहाय र सान्‍त्‍वना दिने कोही नभएको सहर, म बहुमूल्‍य पत्‍थरहरूले फेरि तेरो जग बसाल्‍नेछु। म तेरा बुर्जाहरू लालमणिले बनाउनेछु, तेरा मूल-ढोकाहरू आगोझैँ बल्‍ने बहुमूल्‍य पत्‍थरहरूले र तेरा चारैपट्टिका पर्खाल रत्‍नहरूले बनाउनेछु। “तेरा सबै मानिसहरूलाई म आफैं शिक्षा दिनेछु र तिनीहरूलाई सुख-शान्‍ति दिनेछु। न्‍याय र धर्मले तँ बलियो बन्‍नेछस्, अत्‍याचार र डरबाट तँ निडर रहनेछस्। कोही तँमाथि आइलाग्‍यो भने त्‍यो मैले गराएको हुनेछैनँ, तेरो विरुद्धमा लडाइँ गर्ने तँसित हार्नेछ। “आगोको भुङ्ग्रो बनाएर हतियार तयार गर्ने लोहारलाई मैले सृष्‍टि गरेको हुँ र ती हतियार चलाउने सिपाहीलाई पनि मैले सृष्‍टि गरेको हुँ। तर कुनै हतियारले तँलाई चोट लगाउन सक्‍नेछैन। तँलाई दोष लाउनेहरूको मुखमा बुजो लाग्‍नेछ। म मेरा सेवकहरूको बचाउ गर्नेछु र तिनीहरूलाई विजय दिनेछु।” परमप्रभु बोल्‍नुभएको छ।
१ शमूएल १:१-२८
 एफ्राइम कुलका एक जना एल्‍काना नाम गरेका मानिस थिए। उनी एफ्राइमको पहाडी मुलुकको रामतैम भन्‍ने सहरमा बास गर्थे। उनी यरोहामका छोरा र एलीहूका नाति थिए अनि सूप वंशका र तोहूका घरानाका थिए। एल्‍कानाका दुईटी स्‍वास्‍नीहरू थिए, हन्‍नाह र पनिन्‍नाह। पनिन्‍नाहको सन्‍तान थियो; तर हन्‍नाहको थिएन। हरेक साल एल्‍काना आराधना गर्न र सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरलाई बलि चढाउन रामतैमबाट शीलो जान्‍थे। शीलोमा परमप्रभुका पूजाहारीहरू एलीका दुई छोरा होप्‍नी र पीनहास थिए। बलि चढाएको बेला हरेक समय एल्‍कानाले मासुको एक भाग पनिन्‍नाह र उनका छोरा-छोरीहरूलाई दिन्‍थे। उनले हन्‍नाहलाई औधी माया गरे तापनि तिनलाई एकै भाग मात्र दिन्‍थे किनभने परमप्रभुले हन्‍नाहलाई बालबच्‍चा दिनुभएको थिएन। तिनकी सौता पनिन्‍नाहले तिनलाई दु:ख दिन्‍थी र खसालेर कुरा गर्थी किनभने परमप्रभुले तिनलाई बाँझी राख्‍नुभएको थियो। यो हरेक साल भइरहन्‍थ्‍यो। जहिले-जहिले तिनीहरू परमप्रभुको भवनमा जान्‍थे, पनिन्‍नाहले हन्‍नाहको मनलाई यति दु:खित पारिदिन्‍थी कि हन्‍नाह रोएर खान छोडिदिन्‍थी। तिनका लोग्‍ने एल्‍कानाले सोध्‍थे, “हन्‍नाह, तिमी किन रुन्‍छ्यौ? किन तिमी खान्‍नौ? किन तिमी सधैँ यस्‍तो अफसोस गछ्‌र्यौ? के म तिम्रो निम्‍ति दश छोराहरूभन्दा बढ्ता छैन र?” [9-10] एक दिन शीलोमा परमप्रभुको भवनमा भोजन गरिसकेपछि हन्‍नाह उठिन्। तिनी औधी दु:खित थिइन् र परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्दा मुटु छेडिने गरी रोइन्। त्‍यस बेला पूजाहारी एली ढोकाको नजिक बसिरहेका थिए। *** हन्‍नाहले एउटा गम्‍भीर प्रतिज्ञा गरिन्, “हे सर्वशक्तिमान् परमप्रभु! म तपाईंकी दासीप्रति निगाह गर्नुहोस्। मेरो कष्‍ट हेर्नुहोस् र सम्‍झना गर्नुहोस्। मलाई नभुल्‍नुहोस्। तपाईंले मलाई एउटा छोरा दिनुभयो भने म प्रतिज्ञा गर्दछु कि म त्‍यसलाई त्‍यसको जीवनभरि तपाईंलाई अर्पण गर्नेछु र त्‍यसको केश कहिल्‍यै काटिनेछैन।” हन्‍नाहले धेरै बेरसम्‍म परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिरहिन् अनि एलीले तिनका ओठ चलेका हेरिरहे। हन्‍नाहले मनमनै प्रार्थना गर्दै थिइन्, तिनका ओठ चल्‍दै थिए तर केही शब्‍द निस्‍कँदैनथ्‍यो। यसकारण एलीले तिनी मातेकी भन्‍ने सोचेर तिनलाई भने, “आफूलाई मातेकी देखाउन छोड। मद्य पिउन छोडिदेऊ र होशमा आऊ!” “होइन, म मातेकी छैनँ हजुर!” तिनले भनिन्, “मैले मद्य पिएकी छैनँ। म हताश भएकी छु र परमप्रभुको अघि आफ्‍ना दु:ख पोखाउँदै प्रार्थना गरिरहेकी छु। मलाई व्‍यर्थकी स्‍त्री नठान्‍नुहोस्। म अत्‍यन्‍त दु:खित छु र यसरी प्रार्थना गरिरहेकी छु।” एलीले भने, “शान्‍तिसित जाऊ। इस्राएलका परमेश्‍वरले तिमीले उहाँलाई मागेको कुरा तिमीलाई देऊन्।” तिनले उत्तर दिइन्, “म तपाईंको दयाको योग्य हुन सकूँ।” तब तिनी गइन् र केही खाना खाइन् अनि अफसोस गर्न छोडिन्। भोलिपल्‍ट एल्‍काना र तिनको परिवार बिहान सबेरै उठे र परमप्रभुको आराधना गरेर आफ्‍नो घरतिर रामामा गए। एल्‍कानाले आफ्‍नी स्‍वास्‍नी हन्‍नाहसित सहवास गरे र परमप्रभुले तिनको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। यसरी हन्‍नाह गर्भवती भइन् र एउटा छोरो जन्‍माइन्। त्‍यसको नाम तिनले शमूएल राखिन् र भनिन्, “मैले त्‍यसलाई परमप्रभुसित मागेकी छु।” एल्‍काना र तिनको परिवार शीलोमा गई हरेक वर्ष परमप्रभुलाई बलिदान चढाउने समय आइपुग्‍यो र उनले विशेष बलिदान चढाउने प्रतिज्ञा गरेका थिए। तर यसपालि हन्‍नाह साथमा गइनन्। तिनले लोग्‍नेलाई भनिन्, “बालकले दूध खान छोडेपछि म त्‍यसलाई परमप्रभुको भवनमा लैजानेछु र त्‍यो त्‍यहाँ आफ्‍नो जीवनभरि रहनेछ।” एल्‍कानाले जवाफ दिए, “हुन्‍छ, जे तिमीले असल ठान्‍छ्यौ, त्‍यही गर। बालकले दूध खान नछोडेसम्‍म घरै बस। परमप्रभुले तिम्रो प्रतिज्ञा पूरा गराऊन्।” यसकारण हन्‍नाहले घरमा नै बसेर आफ्‍नो छोरा स्‍याहारिन्। बालकलाई दूध छुटाएपछि तिनले शीलोमा लगिन्। साथै तिनले एउटा तीन वर्षको साँढे, दश किलोग्राम पीठो र मद्यले भरिएको एउटा छालाको मशक पनि लगिन्। सानो शमूएललाई तिनले परमप्रभुको भवन शीलोमा लगिन्। साँढेलाई मारिसकेपछि तिनीहरूले बालकलाई एलीकहाँ लगे। हन्‍नाहले उनलाई भनिन्, “हजुर, के तपाईंलाई मेरो याद छ? तपाईंले देख्‍नुभएको यहाँ खडा भएर परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिरहेकी स्‍त्री म नै हुँ। मैले उहाँसँग यो बालक मागेकी थिएँ र मेरो बिन्‍तीअनुसार उहाँले मलाई दिनुभयो। यसकारण म त्‍यसलाई परमप्रभुकहाँ अर्पण गर्दै छु। यसको जीवनभरि त्‍यो परमप्रभुको भइरहनेछ।” तिनीहरूले त्‍यसपछि त्‍यहाँ परमप्रभुको आराधना गरे।